नेपालका उत्कृष्ट २५ प्लस टु (कक्षा ११, १२) | Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो हुँदै गएको छ । सोही अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले आगामी असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाइ उडान शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर विश्लेषण गर्दै शैक्षिक संस्थाहरू संचालनमा ल्याउने सरकारको गृहकार्य छ ।
यस वर्ष पनि चार लाख ७२ हजार ७८ जना विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तिर्ण गरेका छन् । उनीहरू यतिबेला प्लस टु कलेजको खोजीमा छन् । बजारमा कक्षा ११ र १२ अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु एकसेएक देखिएसँगै विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था छनौट गर्न कठिनाइ हुने गरेका छन् । प्लस टु कलेजहरुको आ आफ्नै आकर्षक प्रचारशैली र आश्वासनले अभिभावक र विद्यार्थीलाई कलेज छनौटमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सबै शिक्षण संस्था अवलोकन गरेर भर्ना हुने कुरा पनि सम्भव छैन् । तर पनि विद्यार्थी र अभिभावकले राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थामा गएर त्यहाँको शैक्षिक वातावरणबारे जानकारी लिन भने सक्छन् ।
शैक्षिक परिणामका हिसाबले साँच्चै नै राम्रा शैक्षिक संस्थाहरुको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो रिपोर्ट तयार पारेका छौं । प्लस टु अध्यापन गराउने उत्कृष्ट २५ शैक्षिक संस्थाको बारेमा केहि जानकारी विद्यार्थीले यो रिपोर्टमा पाउनेछन् । विगत १० वर्षको कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको शैक्षिक परिणामलाई यो रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा अध्ययन गरिएको थियो ।
उत्कृष्ट २५ को सुचीमा रहेका यी शैक्षिक संस्था मात्र अब्बल हुन् भनेर हामी ठोकुवा गर्दैनौं तर पनि यी शैक्षिक संस्थाहरुको शिक्षण प्रणाली राम्रो छ भनेर ढुक्कले भन्न सकिन्छ । अझ भनौं यी शैक्षिक संस्थाले विगत लामो समय देखि अब्बल शैक्षिक परिणाम हासिल गरेकाले तिनले विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित राख्न अध्यापन विधिमा मेहनत गरेका छन् ।
विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अर्थात तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले प्लस टुमा राम्रो परिणाम ल्याउने शैक्षिक संस्थाहरुको तथ्याकं उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । त्यसअनुरुप राम्रा शैक्षिक संस्थाहरू छनौट गर्न सहज हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय कक्षा ११ र १२ को परीक्षालाई अक्षराका पद्धति (ग्रेडिङ सिस्टम) सुरु गरेपछि उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरुको सुची कसरी तयार पार्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो ।
यद्यपि शैक्षिक वातावरण, शिक्षण प्रणाली, शैक्षिक परिणाम, शैक्षिक संस्थाको भौतिक पुर्वाधार, शैक्षिक संस्थाको उत्कृष्ट शिक्षण समुह, अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था छुट्याउन सकिने शिक्षाविदहरु बताउँछन् ।
ग्रेड्रिङ सिस्टममा गइसकेपछि पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले डि र ई ग्रेड ल्याउने उच्च तहको भर्नाका लागि ट्रान्सक्रिप्ट नदिने भएकाले त्यसआधारमा कति विद्यार्थी माथिल्लो तहमा भर्नाका लागि योग्य भए भन्ने प्रष्टिन्छ । विद्यार्थीको लब्धाङ्कपत्रमा अनुतिर्ण उल्लेख नभएपनि ग्रेड डि र ईले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा शुन्य दशमलव आठ शुन्य र शुन्य दशमलव आठ एक देखि १ दशमलव दुई शुन्य जिपिए अर्थात ग्रेड इ र डि ल्याउने विद्यार्थीलाई हटाएर तथ्याकं निकाल्दा राम्रा शैक्षिक संस्था स्वतः छुट्टिन्छन् । कम विद्यार्थी लिएर राम्रो परिणाम ल्याउने भन्दा पनि धेरै विद्यार्थी भर्ना लिएर राम्रो शैक्षिक परिणाम निकाल्न सफल शैक्षिक संस्था यो सूचीमा छन् ।
१. प्रसादी एकेडेमी, ललितपुर
ललितपुरमा अवस्थित प्रसादी २२ वर्ष अघि स्थापना भएको हो । कक्षा ११ र १२ विज्ञान र व्यवस्थापन संकायमा पठन पाठन गराउने प्रसादी एकल कार्यक्रम एकल व्यवस्थापनको मुल सुत्रमा आधारित छ । प्लस टु अध्यापन गराउने उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको नम्बर एकमा पर्न सफल प्रसादी अनुशासित वातावरण, गुणस्तरीय पठन विधिका कारण अब्बल भएको हो । निश्चित संख्यामा भर्ना लिने प्रसादीमा अनुभवी शिक्षण टिम छ ।
उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजाका निम्ती अहोरात्र मेहनत गर्ने यो संस्थाले भौतिक संरचना र खेल मैदान भन्दा गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ती लगानी गरेको बताउने गरेको छ ।
निरन्तर ९६ प्रतिशत भन्दा बढिको शैक्षिक परिणाम आत्मसाथ गर्न सफल छ प्रसादी ।
शिक्षकको भूमिकालाई सहजकर्ताको रुपमा प्रस्तुत गरेकाले तथा विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा पनि कसरी पढ्ने भनेर सिकाएकाले सफलता मिलेको प्रसादीको कथन छ । एसईइसम्मको विद्यालय तथा क्याम्पस तहका कुनै कार्यक्रम प्रसादीमा छैनन् । त्यसकारण प्लस टु शिक्षामा फोकस हुन सजिलो भएको प्रसादीको भनाई छ ।
निरन्तर ९६ प्रतिशत भन्दा बढीको शैक्षिक परिणाम ल्याउन सफल प्रसादीको भौतिक संरचना र खेल मैदान भन्दा गुणस्तरिय शिक्षाका निम्ती लगानी गरिरहेको छ । अत्याधुनिक शिक्षण पद्धती, कुशल व्यवस्थापकीय समूह तथा दक्ष र अनुभवी प्रध्यापक पनि प्रसादीको विशेषता हुन् ।
२. काठमाडौं मोडल कलेज, बागबजार
काठमाडौंको मुटु बागबजारमा रहेको यो शैक्षिक संस्थामा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकायमा अध्यापन गराईन्छ । विद्यार्थीलाई अधिकतम् समय अध्यापनमा केन्द्रित गराउने यो उच्च माविले अन्तरक्रियात्मक शैलीमा पठनपाठन गराउँछ । विद्यार्थीको बौद्धिक स्तर उकास्न उनीहरुसँग साक्षात्कार र अन्तरक्रिया गरिदै आएको छ ।
प्रयोगात्मक शिक्षण विधिलाई जोड दिंदै आएको काठमाडौं मोडल माविले अध्ययन गरेको कुरा जीवन उपयोगी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सुविधायुक्त छात्राबास रहेको काठमाडौं मोडलसँग उत्कृष्ट शिक्षण टोली छ, जसले हरदम विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधीमा निगरानी राख्छ ।
उच्च विद्यार्थी भर्ना र उच्च उत्तिर्ण दर रहेको काठमाडौं मोडलमा प्लस टु तहलाई अध्ययनकालकै ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ को रुपमा बुझाइन्छ, जस अन्तर्गत उमेरगत विशेषता, शारीरिक र मानसिक संवेगात्मक पक्षका संवेदनशिलता र विद्यार्थीको भावि शैक्षिक वृत्तिलगायत पक्षमा ख्याल गरिन्छ ।
विश्वविद्यालय बन्ने लक्ष्य राखेको संस्थाले केएमसी ग्रुप अन्तर्गत रहेर आधा दर्जन भन्दा बढी शिक्षणसंस्थाहरू संचालन गर्दै आएको छ । दक्ष तथा अनुभवी व्यवस्थाकीय समूहद्वारा संचालित यस कलेजका विद्यार्थीहरुले पनि अन्तराष्ट्रियस्तरमा ख्याती कमाएका छन् ।
३. सेन्ट जेभियर्स, माइतीघर
धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकको रोजाइमा पर्न सफल यस कलेजले पछिल्लो समय निकै राम्रो सफलता हात पारेको छ । युनिफर्म नभएपनि ‘युनिट अफ हार्ट’ (मुटुको एकता) भएको संस्था हो, सेन्ट जेभियर्स कलेज, माइतीघर । फ्रेमवर्क भित्र रहेर विद्यार्थीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएकाले यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्छन् । विज्ञान संकायमा मात्र अध्यापन (५ सय ४ विद्यार्थी) गराउने यो संस्थाले पढाईमा निरन्तरता, विदामा कमी, उच्चस्तरको फ्याकल्टी, आधुनिक प्रयोगशाला, आन्तरिक परीक्षा जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिने गरेको छ ।
अतिरिक्त क्रियाकलाप र काउन्सिलिङमा समेत उत्तिकै ध्यान दिँदै आएको यस कलेजले तीन तीन महिनामा परीक्षा लिने गरेको छ । अत्याधुनिक शिक्षण पद्धती, कुशल व्यवस्थापकीय टिम तथा दक्ष प्रध्यापकहरु यस कलेजका विशेषता हुन् ।
विद्यार्थीले विषयवस्तु विद्यार्थी माझ राखिसकेपछि शैक्षिक संस्थाले थप शोधखोज र अनुसन्धानका निम्ती विद्यार्थीलाई नै सक्रिय गराउने गर्छ ।
छात्राहरुले मात्र अध्ययन गर्ने सेन्ट मेरिज मावि निरन्तर सफल शैक्षिक परिणाम हासिल गर्ने शैक्षिक संस्थाभित्र पर्छ ।
अध्ययनका अतिरिक्त विद्यार्थीलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका निम्ती प्रेरित गर्ने सेन्ट मेरिजमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी संकायमा अध्यापन हुने गरेको छ । निश्चित संख्यामा विद्यार्थी लिएर सोहि अनुरुप सफल परिणाम दिने यो संस्थामा आफ्नै संस्थाबाट एसईई उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
शोधको नतिजा विद्यार्थीले सबैसामु राख्ने, छलफल गर्ने र नबुझेका विषयमा प्रश्न राख्ने गरिन्छ । विद्यार्थीको बौद्धिक स्तर बढाउन संस्थाले विविध गतिविधी गर्ने गरेको छ । यस कलेजमा एक विद्यार्थी सफलताको शिखरमा पुग्न आवश्यक सबै पूर्वाधार पर्याप्तरुपमा उपलब्ध छन् ।
४. ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट
व्यवस्थापन संकायको कलेजहरुमा मुलुककै नम्बर वान शैक्षिक संस्था हो, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट । मध्य बानेश्वरमा रहेको यो कलेजले व्यवस्थापन संकायमा गजबको सफलता पाएकै कारण ग्लोबल एसोसिएट्स अन्तर्गतको ग्लोबल स्कुल अफ साइन्स कलेज पनि संचालनमा ल्याएको छ । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले सैद्धान्तिक शिक्षाको विकल्पमा प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । उच्च भौतिक पुर्वाधार, आधुनिक शिक्षण प्रणाली, भव्य ल्याब र लाइब्रेरी यो कलेजका आकर्षण हुन् ।
अध्ययनको क्रममा प्रोजेक्ट वर्कलाई प्राथमिकता दिँदै आएको यस कलेजले विद्यार्थीको मनोविज्ञान र क्षमता पहिचान गरेर अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ । कलेजले रोजगार बजार अनुकुल शैक्षिक कार्यक्रममार्फत दक्ष व्यवस्थापक, उद्यमी एवं व्यवसायी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मोडलमा रहेको ग्लोबल एसोसिएट्स उसको लक्ष्य अनुरुप मुलुककै एउटा विशिष्ट र नमुना शैक्षिक प्रतिष्ठान बन्ने यात्रामा सफल सावित भएको छ ।
विद्यार्थीको मनोविज्ञान र क्षमता पहिचान गरेर त्यसअनुरुप उनीहरुको व्यक्तित्व निर्माणमा जोड दिनु ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टको विशेशता हो । ग्लोबलमा विद्यार्थीले जुनसुकै समयमा शिक्षकसँग परामर्श लिन सक्ने वातावरण छ । कलेजले रोजगार बजार अनुकुल शैक्षिक कार्यक्रममार्फत दक्ष व्यवस्थापक, उद्यमी एवं व्यवसायी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शिक्षकको प्राज्ञिक गुणस्तर कायम राख्न उनीहरुको वृत्तिविकासलाई समेत ध्यान दिएको ग्लोबलले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाउन दिने गरेको छ, यसले कलेजको अनुशासन कायम रहने बुझाई छ ।
५. एनसीसीएस उच्च मावि
१८ बर्षअघिदेखि एकेडेमिक क्षेत्रमा समर्पित एनसीसीएस अर्थात नेशनल कलेज अफ कम्युटर स्टडिज कलेजमा भर्ना हुन एसईईमा कम्तीमा ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गर्नै पर्छ । ग्रेडिङ सिस्टममा आउनुअघि ९० प्रतिशतभन्दा बढी र ग्रेडिङ सिस्टममा आएपछि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रिजल्ट प्राप्त गर्न सफल छ एनसीसीएस कलेज काठमाडौंको पकनाजोलमा रहेको छ ।
एनसीसीएस राष्ट्रका लागि जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्न कटिबद्ध रहेको बताइन्छ । विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा जोड दिँदै आएको यो उमाविले खेलकुदलगायत अतिरिक्त गतिविधिलाई पनि उत्तिकै महत्व दिँदै आएको छ ।
जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न सक्ने योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य एनसिसिएसको छ ।
कक्षा कोठामा छिर्नुपूर्व नै शिक्षकले सम्बन्धित विषयमा ‘वर्कआउट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी काठमाडौंको चण्डोलमा समेत एनसीसीएसको भगिनी संस्था नेशनल क्रिएटिभ कोएजुकेशनल स्कूल एनसीसीएसको प्लसटु सञ्चालनमा छ ।
पारिवारिक वातावरण, लगनशिल शिक्षक, चुस्त प्रशासन सेन्ट मेरिजमा अन्तरक्रियात्मक प्रणाली अनुसार अध्यापन गराइन्छ ।
विद्यार्थीले पढाइलाई बोझको रुपमा नलिउन् भनेर शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध प्रेमपुर्ण बनाउने, असल काम नै अनुशासनको शर्त मान्ने, म होइन हामी भन्ने भावना विकास गर्ने कठोर परिश्रम र सकारात्मक सोच राख्न सिकाउने सेन्ट मेरिज सफल हुनुका आधार हुन् ।
छात्राहरुले मात्र अध्ययन गर्ने सेन्ट मेरिज मावि निरन्तर सफल शैक्षिक परिणाम हासिल गर्ने शैक्षिक संस्थाभित्र पर्छ । अध्ययनका अतिरिक्त विद्यार्थीलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका निम्ती प्रेरित गर्ने सेन्ट मेरिजमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी संकायमा अध्यापन हुने गरेको छ । निश्चित संख्यामा विद्यार्थी लिएर सोहि अनुरुप सफल परिणाम दिने यो संस्थामा आफ्नै संस्थाबाट एसईई उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा मात्र सिमित नराखी उसको सर्वाङ्गिण विकासमा ध्यान दिने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धामा विजेता मात्र होइन, असल विजेता बन्नुपर्छ भन्ने सेन्टमेरिजको मान्यता हो । प्रतिस्पर्धाको भावनासँगै त्यसमा पवित्रता र नैतिकताको समेत अपेक्षा गरिन्छ । पुस्तक अध्ययन गर्नु मात्र ज्ञान नभई विद्यार्थीमा मानविय मुल्य र सामाजिक उत्तरदायित्वका भाव पैदा गराउनु सबैभन्दा ठुलो विद्या हो भन्ने सिकाउने यो शैक्षिक संस्थाले विद्यालयमा जानेका कुरा समाज र पेशागत क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउने खुबी विद्यार्थीलाई सिकाउछ ।
विद्यार्थीलाई सिर्जनशिल बन्न सेन्टमेरिजले प्रेरित गर्छ ।
पारिवारिक वातावरण, लगनशिल शिक्षक, चुस्त प्रशासन सेन्ट मेरिजका विशेशता हुन् । अन्तरक्रियात्मक प्रणाली अनुसार अध्यापन गराइने भएकाले विद्यार्थीले स्वतन्त्र ढंगले चिन्तन मनन गर्ने वातावरण शिक्षकले उपलब्ध गराउछन् । विद्यार्थीमा निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नसके उनीहरुलाई यसो गर उसो गर भन्न नपर्ने विद्यालयको मान्यता छ । विद्यार्थीले पढाइलाई बोझको रुपमा नलिउन भनेर शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध प्रेमपुर्ण बनाउने, असल काम नै अनुशासनको शर्त मान्ने, म होइन हामी भन्ने भावना विकास गर्ने कठोर परिश्रम र सकारात्मक सोच राख्न सिकाउने सेन्ट मेरिज सफल हुनुका आधार हुन् ।
वि.सं. २०५९ सालमा स्थापित विराटनगरको मेरिल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल व्यवस्थापन संकायमा मोफसलको सर्वोत्कृष्ट कलेज हो । प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल मेरिल्यान्ड प्रदेश नम्बर १ कै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था हो ।
२०५९ सालमा स्थापित मेरिल्यान्ड विराटनगरले त्यसयता निरन्तर सफल परिणाम ल्याएर आफुलाई अब्बल सावित गरेको हो । प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल मेरिल्यान्ड प्रदेश नम्बर १ कै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था हो । अध्ययनमैत्री वातावरण बनाउन सफल यो संस्थाले प्रविधिमैत्री शिक्षा, नियमित आन्तरिक परीक्षा प्रणाली, आवश्यकता अनुसार वाह्रै महिना अतिरिक्त कक्षा, प्रोजेक्ट वर्क बेस लगायतका गतिविधी मेरिल्यान्डका विशेषता हुन् ।
प्लस टु शिक्षामा अब्बल सावित भएलगत्तै २०६६ सालदेखि बिबिएसको पठन पाठन आरम्भ गरेको यो संस्थामा प्लस टु तहमा १ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मोफसलमा रहेर पनि अन्तराष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गरेको कलेजको भनाई छ । मेरिल्यान्डले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि विशेश छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
अनुशाशित वातावरणमा उत्कृष्ट फ्याकल्टी अध्ययन अध्यापन गराएकै कारण मेरिल्यान्ड प्लस टु तहमा सफल शैक्षिक संस्था बनेको कलेजले बताएको छ । विद्यार्थीलाई नियमित अध्ययन बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा सक्रिय गराउन पनि कलेजले उत्तिकै भुमिका खेल्ने गरेको छ ।
८. ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज
‘भविष्यका लागि शिक्षा’ भन्ने मिसनका साथ अघि बढेको यो कलेजमा प्लस ं२ र ए लेभल तह अन्तर्गत विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायको पढाई भईरहेको छ भने स्नातक तहमा बीएससीसिएसआइटी, बीबीएस, बीए र अंग्रेजीमा एमए सम्मको पढाई हुँदै आएको छ ।
नविन शैक्षिक आयामहरुको उच्चतम प्रयोग हुँदै आएको यस कलेजले क्लास टेष्ट, मासिक, टर्मिनल तथा प्रि बोर्ड परीक्षा मात्रै होईन ‘मक एक्जाम’ पनि लिने गरेको छ ।
कलेजले चिकित्सा र इञ्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षालाई मध्यनगर गर्दै ‘सिनर्जिष्टीक टिचिङ लर्निङ’ पद्धतीबाट अध्ययन अध्यापन गर्दै आएको छ । उपयुक्त भौतिक वातावरणका साथै प्रेरणादायी शिक्षण विधिमार्फत अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको यस कलेजमा विभिन्न प्रकारका ‘को करिकुलर’ तथा ‘एक्स्ट्रा करिकुलर’ क्रियाकलापहरु समेत यथेष्ठ मात्रामा समावेश छन्
९. सगरमाथा मावि, पोखरा
अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पोखरास्थित सगरमाथा माविले लामो समयदेखि निरन्तर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । सगरमाथाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमैत्री वातावरण दिनुलाई मोबाइल, मिनिस्कर्ट र मोटरसाइकलमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
विद्यालयका सबै संचालक शिक्षक भएकाले पनि शैक्षिक गुणस्तर अब्बल रहेको बताइन्छ । विद्यार्थीमैत्री शिक्षण विधि, कमजोर विद्यार्थीलाई परामर्श एवं अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था साथै उच्चतम् प्रविधि प्रयोग गरिएका कक्षा कोठा सगरमाथाका विशेषता हुन् ।
१०. जेभियर इन्टरनेसनल कलेज
सन् १९९६ मा स्थापना भएको जेभियर इन्टरनेसनललाई नेपालको अग्रणी शैक्षिक संस्थाको रुपमा लिईन्छ । ‘एक्सपेरियन्स द बेष्ट’ भन्ने मुल नाराकासाथ संचालित जेभियर इन्टरनेशनलले उत्कृष्टता, अनुशासित, जिम्मेवार र नेत्वृदायी शिक्षाको पहिचान बनाईसकेको छ । जेभियर इन्टरनेशनलमा ए लेभल, प्लस टु, बीसीए, बीएससी इन्भाइरोमेन्ट, बीएससी माइक्रोबायोलोजी, बीबीएम, बीबीएस, बीएसडब्यु, एमबीबीएसलगायतको अध्ययन अध्यापन गराईन्छ ।
प्रयोगात्मक र समय सापेक्ष शिक्षामा जोड दिँदै आएको यस कलेजले परिवर्तित प्रविधि, पाठ्यक्रम र व्यवहारिक ज्ञानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उत्कृष्ट शिक्षासँगै विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासलाई पनि मध्यनजर गर्दै कलेजले खेलकुद, मनोरोञ्जन, वक्तृत्वकला, विज्ञान, रोबटिक, फोटोग्राफी तथा आर्टलगायतका विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालका स्टार क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई ब्राण्ड एम्बास्डरमा नियुक्त गरेर कलेजले आफ्नो उद्धेश्यलाई प्रमाणित गरेको छ । ‘उचित शैक्षिक वातावरण नै उत्कृष्ट शिक्षाको आधार हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यस कलेजले क्यान्टिन, क्लासरुम, बाथरुमदेखि होस्टेलसम्मका पूर्वाधारहरु खडा गर्दैसुविधासम्पन्न कम्प्युटर ल्याव, साइन्स ल्याव, लाइब्रेरी, सिकरुम, एभी रुमको व्यवस्था गरेको छ ।
११. काठमाडौं बर्नहार्ट
हरेक साता परीक्षा लिने र विद्यालयको परीक्षा समितिले औँल्याएका पक्षलाई आत्मसात् गर्दै अध्यापन गराउने शैली यहाँ प्रभावकारी बनेको छ, जसलाई सफलताको मूल आधार मानिन्छ ।
कमजोर विद्यार्थीको पढाइ उकास्ने उपाय पनि समितिले नै सुझाउँछ र शिक्षकले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् । विज्ञहरू बोलाएर विद्यालयमै तालिम दिने व्यवस्था गरिन्छ । कुनै शिक्षक अनुपस्थित भएमा अर्को विषयगत शिक्षकले कक्षा लिन्छन् । गृहकार्य जाँच्न रुटिनमै छुट्टै पिरियड व्यवस्था गरिएको छ । यिनै कारणले सामान्य विद्यार्थीलाई पनि उत्कृष्ट हैसियतमा पुर्याउन सफल रहँदै आएको छ ।
१२. लिटिल एन्जल्स, ललितपुर
लिटिल एन्जल्स, ललितपुर अभ्यासद्धारा आर्जन गरिएको ज्ञान दिगो हुन्छ भन्ने मान्यतामा संचालित छ । योग्य र जिम्मेवार शिक्षक समुहले अभ्यास केन्द्रित शिक्षण विधि अपनाएकाले निरन्तर सफलता हासिल गरेको लिटिल एन्जल्सको भनाई छ । कम शुल्कमा स्तरिय शिक्षा प्रदान गरेको लिटिल एन्जल्सले विद्यार्थीको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विभिन्न प्रतियोगितात्मक कक्षाहरु संचालन गर्ने गर्छ ।
विज्ञान र व्यवस्थापन संकायमा अध्यापन हुने यो शैक्षिक संस्थामा उत्कृष्ट भौतिक पुर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर, शान्तिपुर्ण शैक्षिक वातावरण भएकाले मुलुककै अब्बल संस्था बन्न सहज भएको बताइन्छ । आधुनिक कक्षा कोठा सहितको यो संस्थाले श्रव्यदृष्य माध्यममार्फत प्रभावकारी रुपमा पठनपाठन गराउदै आएको छ । स्थापनाको दुई दशकमा निरन्तर ९० प्रतिशतभन्दा माथिको परिणाम ल्याउने यो संस्थाले योग्य पुर्णकालिन शिक्षक राखेर शिक्षकको अध्यापन विधिलाई सधैं निगरानीमा राख्ने गर्छ । किताबी ज्ञानका अतिरिक्त शिक्षकले जीवनउपयोगी व्यवहारिक ज्ञान दिन कत्तिको सामथ्र्य राख्छ भन्ने ख्याल गरिन्छ ।
विद्यार्थीलाई अध्ययनमा प्रेरित गर्दै ऊभित्रको विशेष खुबी पहिचान गरेर करिअर काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था यो शैक्षिक संस्थाले गरेको छ । निरन्तर मुल्याकंन विधि बनाएर विद्यार्थीलाई योग्यताको कसीमा राखिने भएकाले उनीहरुले हरेक आवधिक परीक्षामा आफुलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीको मनोबल उच्च राख्न संस्थाले विशेश ध्यान गरेको छ । कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाका अतिरिक्त सबै विद्यार्थीलाई आइएलटिएस, पब्लिक स्पिकिङ, लिडरसिप ट्रेनिङ लगायतका कुरामा ध्यान दिइन्छ ।
वि.सं. २०५४ सालमा ४५ जना विद्यार्थीबाट पाइला चालेको यस कलेजले हाल आफ्नै दुईवटा भवनमा १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्यापन गराउँदै आएको छ । शिक्षण पेशामा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरुको सहकार्यमा स्थापित यस कलेजले विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
कलेजले खेलकुदमा रुची राख्ने विद्यार्थीहरुलाई खेलकुदमा पनि सहभागी गराउने गर्दछ । यस कलेजले जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यहाँ कितावी ज्ञानलाई मात्र ध्यानमा नराखी व्यवहारिक शिक्षामा पनि जोड दिने गरिन्छ ।
यस कलेजमा प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि प्रयोगात्मक ल्याव छ । यस्तै कलेजलले वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई तालिम दिनको लागि तालिम केन्द्रको पनि स्थापना गरेको छ । यस कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु वैंक तथा वित्तीय संस्था, कलाकारिता लगायत विभिन्न क्षेत्रका सम्मानित पदमा कार्यारत छन् ।
हरेक शैक्षिक सत्रमा ‘टपर’ विद्यार्थीहरु उत्पादन गरिरहेको पेण्टागन इन्टरनेशनल कलेज काठमाडौंको तिनकुनेमा अवस्थित छ । विद्यार्थीको मनोभावना अध्ययन गर्दै व्यवहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने यस कलेजमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकि संकायमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ ।
यस कलेजमा स्नातक तहतर्फ बिए, बिएसडब्ल्यू, र बिबिएस अध्यापन भइरहेको छ ।
९० प्रतिशतभन्दा माथि रिजल्ट ल्याएर उत्कृष्ट कलेजको रुपमा चिनिएको यस कलेजले विद्यार्थीका लागि अत्यावश्यक खेलकुद, भ्रमण, काउन्सिलिङ, प्रतियोगिताहरु लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापहरु पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विद्यार्थीको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धतासहित संचालित सीसीआरसी कलेजमा प्लस टु अन्तर्गतको विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको अध्ययन अध्यापन गराइदै आएको छ । निरन्तर सर्वोत्कृष्ट नतिजा, एमबीबीएस, बीइ र सीएको प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा, विश्वकाचर्चित टप विश्वविद्यालयहरुमाछात्रवृत्ति पाउनुलगायत नै यो कलेजको महत्वपूर्ण विशेषता हुन् ।
यस कलेजमा नतिजालाई मात्रै होईन विद्यार्थीहरुको शारिरीक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कलेजमै विभिन्न क्लवहरु स्थापना गरिएको छ ।
यस कलेजमा विद्यार्थीमैत्री कक्षाकोठा, क्यान्टिन, होस्टेल, लाइब्रेरी, विभिन्न प्रयोगशालाहरु, कम्प्युटर ल्याव, यातायातलगायतको सुविधा छ ।
काठमाडौंको थापाथलीमा अवस्थित एभरेष्ट कलेज ब्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्न चाहानेहरुकालागि उत्तम मानिन्छ । प्लस टुका साथै बीबीएस, बीबीए र एमबीएस तहको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको यस कलेजको आकर्षक भौतिक संरचना, प्रविधिले सुसजित विद्यार्थीमैत्री कक्षाकोठा, अतिरिक्त पठन सामाग्रीसहितको लाइब्रेरी, र स्वच्छ वातावरण पनि कलेजको अर्काे विशेषता हो ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन एभरेष्टको प्रमुख लक्ष्य र उद्धेश्य रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित र अनुभवी शिक्षक तथा ब्यवस्थापकहरु रहेको यस कलेजमा विद्यार्थीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद को सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ ।
यसका साथै विद्यार्थीहरुको बौद्धिक विकासकालागि विभिन्न प्रकारका प्रतियोगिताहरुसमेत आयोजना गर्दै आएको छ ।
नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित सैनिक आवासीय महाविद्यालय पनि नेपालको सर्वोत्कृष्ट उच्च माविको सूचीमा समावेश छ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न यहाँ शिक्षक भर्नादेखि नै ध्यान दिइन्छ । लिखित, मौखिक परीक्षा र कक्षा कोठामा उसको प्रस्तुतिका आधारमा शिक्षक छनोट गरिन्छ ।
विद्यार्थीलाई परीक्षाप्रति तयार बनाउन समूह–समूह बनाएर छलफल गराउने, कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्ने र विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसालेकाले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सम्भव भएको हो ।
यहाँ बाक्लैरुपमा अभिभावक भेटघाट कार्यक्रमहरु हुने गर्छन् । यस्तो अभ्यासले विद्यालयलाई निरन्तर अभिभावकको निगरानीमा राखेको अनुभूति गराउँछ ।
आफ्नो लक्ष्यप्रति सजग भइरहन्छन् । प्राज्ञिक रूपमा मात्र नभई विद्यार्थीको रुचि र क्षमता अनुसार भविष्यमा जुनसुकै क्षेत्रमा पुग्न सक्ने गरी सक्षम नागरिक तयार गर्न प्रयत्नशील छ यो कलेज ।
काठमाडौंको कमलपोखरीमा अवस्थित किष्ट कलेज २४ बर्षअघि स्थापना भएको हो । आधुनिक भौतिक पूर्वाधारले सुसजित यस कलेजमा पुस्तकालय, सुविधा सम्पन्न विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, महिला तथा पुरुष होस्टल, क्यान्टिन, खेलमैदान, यातायात लगायतका विविध सुविधाहरु रहेका छन् ।
आकर्षक खेलमैदान विद्यार्थीलाई लोभ्याउने अर्को विशेषता हो, किष्ट कलेजको । प्लस टु तर्फ विज्ञान र व्यवस्थापनमा अध्ययन गराउँदै आएको यस कलेजले स्नातकमा बिबिए, बिआइएम, बिबिएस र बिएस्सीमा माइक्रोबायोलोजी, विआईटीको अध्ययापन गराउँदै आएको छ ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी नतिजा हासिल गर्दै आएको यस कलेजले विद्यार्थीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, सांस्कृतिक, हाजिरीजवाफ, वक्तित्वकला तथा विभिन्न लेखन प्रतियोगिता इत्यादि पनि संचालन गर्दै आएको छ ।
काठमाडौंको बबरमहलमा अवस्थित नेपाल मेगा कलेज १० बर्षअघि स्थापना भएको हो ।
दक्ष ब्यवस्थापकीय टिमले संचालन गरेको यो कलेजमा यस कलेजमा प्लस टु तर्फ साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्यूम्यानिटिज र ‘ल’को अध्ययन–अध्यापन हुने गर्छ । ९० प्रतिसतभन्दा बढीको रिजल्ट र ठूलो संख्यामा स्कलरशिपको व्यवस्था रहेको यस कलेजमा साइन्स् ल्वाब, मिटिङहल, लाइब्रेरी, क्यान्टिन लगायतका भौतिक पूर्वाधार छन् ।
२०. आइएसटी कलेज
सर्लाजवर्ग युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्स् अस्ट्रीयाको सम्बन्धनमा सञ्चालित यस कलेज टुरिजम र होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ ।
होटल म्यानेजमेन्ट कलेजकालागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधाले सुसजित यस कलेजमा बेकरी, एक्स्क्लुशीप बार, प्राक्टिकल किचन, प्राक्टिकल रेस्टुरेन्ट, हाउस किपिङकोलागि मेकअपरुम, होटल रिर्जभेसन सिष्टमहरु लगायतका सबै सुविधाहरु रहेका छन् ।
आई एस टी सेकेण्डरी स्कूल काठमाडौको बिशिष्ट क्षेत्र ज्ञानेश्वरमा अवस्थित रहेको छ । यस सेकेण्डरी स्कूलले होटल मेनेजमेन्ट र ट्राभल टुरिजम बिषयको बिशिष्टिकरणमा प्लस टु का कक्षाहरु उत्कुष्ट शिप , ज्ञान र दक्षता भएका प्राध्यापकहरुबाट संचालन गर्दे आईरहेको छ । यस स्कूल आफ्नै प्राक्टिकल कक्षाका लागी आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै डेमो किचेन, डेमो रेष्टुरेन्ट, डेमो बार, डेमो मक–अप रुम, बारिस्ता, बेकरि, फ्रन्ट अफिसका साथै सम्पूर्ण सुबिधाले ससुज्जित रहेको छ ।
यो स्कूल उच्चकोटीको भौतिक पूवाधार तथा अन्तराट्रियस्तरको प्रशिक्षण पद्धति, योग्य तथा अनुभवी प्राध्यापक, ईन्टर्नशीप, मध्यमस्तरको शुल्कका कारण बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको पहिलो रोजाईमा पर्दछ ।
जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य बोकेको यो कलेज काठमाडौंको तिनकुनेमा अवस्थित छ । विगत २० बर्षदेखि संचलित यस कलेजले प्लस टु अन्तर्गत साइन्स, म्यानेज्मेन्ट र ह्युमानिटिज, ब्यचलर अन्तर्गत बीसीए, बीबीएस, बीएसडब्लु, बीए र मास्टर अन्तर्गत एमबीएस र एमए तहको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ ।
एकाइसौं शताब्दीको माग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा, रियल लाइफ ट्रेनिङ, रिसर्च ओरिन्टेशनलगायतको मिसन बोकेको छ ।
सोही अनुसार कलेज विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक विभिन्न प्रकारका काउन्सिल र अतिरिक्त शिक्षा समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेज १९ बर्षअघि स्थापना भएको हो ।
सबल र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने उद्धेश्यका साथ स्थापित यस कलेजमा प्लस टुका साथै स्नातक र मास्टर लेभलको अध्ययन अध्यापन हुन्छ । प्रोफेसर एवं विषय विज्ञहरुले पढाउँदै आएको यस कलेजले विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेका छन् ।
प्रतिष्ठित शिक्षाविज्ञहरुद्धारा संचालित यस कलेजले शत प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । सफल र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य उद्धेश्य बोकेर संचालनमा रहेको यस कलेजमा प्लस टु, बीबीए, बीबीएस र बीसीए लेभलको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
पठनपाठनका आधुनिक पद्धतीहरु अवलम्वन गर्दै यस कलेजले प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरुलाई पनि उत्तिकै जोड दिँदै आएको छ । कलेजमा शिक्षामैत्री भौतिक संरचना र प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरिएका ल्यावहरुको सुविधा रहेको छ ।
विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई ध्यानमा राखि यस कलेजले चीन र अमेरिकाका विभिन्न कलेजहरुसँग समेत समन्वय गरिरहेको छ ।
पूर्व प्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको यो कलेज काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरमा अवस्थित छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रमा सवैभन्दा वढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो शैक्षिक संस्थाको रुपमा दर्ज भएको यस कलेजमा पुस्तकालय, विज्ञान ल्याव, कम्प्युटर ल्यावका साथैै होस्टल, क्यान्टिन र यातायातको सुविधा । नोवेलले पढाईका अतिरिक्त खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट वर्क आदि माध्यामबाट व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
काठमाडौंको बसुन्धारामा अवस्थित मोर्गन इन्टरनेशनल कलेजमा प्लस टु तर्फ विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीको अध्ययापन हुँदै आएको छ ।
यस्तै स्नातक तह अन्तर्गत बिआइएम, बिबिएस, बिबिए र बिएचएम कोर्सको पढाई भईरहेको छ । अनुशासित र सक्षम नागरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको यस कलेजले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त खेलकुद, मनोरञ्जन, कला, साहित्य जस्ता क्षेत्रमा पनि जोड दिने गरेको छ ।
ccrc college, ist college, Kist college, Morgan College, Nepal Mega College, Prasadi college, top 25 college of Nepal, trinity college, Triton International College
Prev‘महामारीविरुद्धको साझा चुनौतीको सामनाका लागि विज्ञान कूटनीति’ : शिक्षामन्त्री पोखरेल
कुलमान घिसिङको औपचारिक बिदाइNext